TD REI Forex Indicator - Forex အညွှန်းကိန်းဒေါင်းလုပ်
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 18, 2019
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်း TD REI Forex Indicator
TD REI Forex Indicator
အားဖြင့် Forex Editor ကို -
ဇူလိုင် 11, 2018
TD REI Forex Indicator တစ်ဦးလှိုအခြေစိုက် Forex ကုန်သွယ်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာစျေးကွက်အခြေအနေများယိ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်စျေးကွက်ဘေးတိုက်သုံးနိုငျ. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအချိန်ဘောင်နှင့် ပတ်သက်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်မည်သည့်အချိန်ဘောင်ပေါ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်. ဒီအညွှန်ပြချက်တစ်စုံတစ်ရာငွေကြေးအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. သင်ဤ tool ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုတည်းကိုသာရောင်းဝယ်ဖောက်လို့မရဘူး. သင်တစ်ဦးထိရောက်သောရလဒ်ရှိသည်ဖို့ TD REI ညွှန်ပြချက်တွေနဲ့ပျမ်းမျှနှင့်အခြားယိညွှန်းကိန်းရွေ့လျားကဲ့သို့အခြားအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအတွက် TD REI ညွှန်ပြချက် install လုပ်သည့်အခါ, သင့်ရဲ့ဇယားဤကဲ့သို့သောကိုကြည့်သင့်ပါတယ်:
TD REI ညွှန်ပြချက်နှစ်ခုလှိုပါဝင်ပါသည်. အဆိုပါလှိုတစ်ခုမှာအဖြူရောင်ထူလှိုသည်နှင့်အခြားတဦးတည်းတွေက dotted လှိုဖြစ်ပါသည်. အဲဒီနှစျခုလှိုအဆိုပါ crossover signal ကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းထုတ်ပေး. အဖြူရောင်လှိုဟာတွေက dotted လှိုအထက်ဖြတ်သန်းသွားသည်ဘယ်အချိန်မှာ, တကယ် signal ကိုဖွင့်. အဖြူရောင်လှိုဟာတွေက dotted လှိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြတ်သန်းသွားသည်အလားတူပင်သည့်အခါ, ကရောင်း signal ကိုဖွင့်. သင်စျေးကွက်၏အထွေထွေဦးတည်ချက်အတိုင်းလိုက်နာလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားအမြတ်အစွန်းရှိသည်လိမ့်မယ်.
TD REI ညွှန်ပြချက်အသုံးပြုခြင်းအခြေအနေများဝယ်ယူ.
– White ကလှိုဟာတွေက dotted လှိုအထက်တွင်ကူးသင့်ပါတယ်.
TD REI ညွှန်ပြချက်အသုံးပြုခြင်းရောင်းအခြေအနေများ.
– White ကလှိုဟာတွေက dotted လှိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကူးသင့်ပါတယ်.
– အဖြူရောင်လှိုဟာတွေက dotted အထက်ဖြတ်သန်းသွားသည်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုယူ
Forex အညွှန်းကိန်းဒေါင်းလုပ် – ညွှန်ကြားချက်များ
TD REI Forex Indicator တစ်ခု Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) ညွှန်ကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
TD REI Forex Indicator သည်သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
ဤအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ., ကုန်သည်များအညီထပ်မံစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုယူဆနှင့်၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
template ကိုဖိုင်အားဖြင့်ထိုအတူပြုပါ (.tpl), မဆိုရှိလြှငျ, ဖိုင်မှတ်တမ်း / ပွင့်လင်းဖို့ဒေတာ Folder ကို / တင်းပလိတ်များမှာ.
TD REI Forex Indicator.mq4 install လုပ်နည်း?
TD REI Forex Indicator.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ TD REI Forex Indicator.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / ညွှန်ကိန်းများ /
သင့်ရဲ့ Metatrader လိုင်း Start သို့မဟုတ် restart လုပ်ပါ
ဇယားကို Select လုပ်ပါနဲ့သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုစမ်းသပ်ချင်ဘယ်မှာ TIMEFRAME
ရှာဖှေ “စိတ်တိုင်းကျအညွှန်းကိန်း” သင့်ရဲ့ Navigator ထဲမှာအများအားဖြင့်သင့်ရဲ့ Metatrader လိုင်း၌ကျန်ကြွင်း
TD REI Forex Indicator.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
settings ကိုသို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်း ok modify
indicator TD REI Forex Indicator.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ TD REI Forex Indicator.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ထိုအညွှန်းကိန်းသည်သင်၏ Metatrader လိုင်းအတွက်အပြေးသည်အဘယ်မှာရှိပါဇယားကို Select လုပ်ပါ
ထိုအညွှန်းကိန်း select လုပ်ပြီး delete
ဒေါင်းလုပ် Metatrader4ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း:
အခမဲ့ $30 ခဏအရောင်းအဝယ်ဖြစ် Start မှ
အဘယ်သူမျှမက Hidden စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Download ဖို့အောက်က Link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ:
ယခင်ဆောင်းပါးSkdon Trend Forex Indicator
Next ကိုဆောင်းပါးRD Combo Forex Indicator
Forex Editor ကို
Post ကိုအကှေ့အကောကျ v2 ပိတ် Forex Indicator
Chandelier Forex Indicator
XP မှာပျမ်းမျှ Forex Indicator Moving
သငျသညျငါ၏အမှုကိုကြိုက်လိုလျှင်, ကြင်နာစွာငါ့ကိုပိုပြီးလုပ်ဖို့ငါ့ကိုအားပေးမယ့်လှူဒါန်းမှုပေးပို့. ကြေးဇူးတငျစကား!
Post ကိုအကှေ့အကောကျ v2 ပိတ် Forex Indicator သြဂုတ် 16, 2019
Chandelier Forex Indicator သြဂုတ် 13, 2019
XP မှာပျမ်းမျှ Forex Indicator Moving သြဂုတ် 9, 2019
SL Trend ပါဝါ Forex Indicator သြဂုတ် 6, 2019
တေ Forex Indicator သြဂုတ် 2, 2019
ForexIndicatorsDownload.com MetaTrader ဘို့ညွှန်းကိန်း၏ထောင်ပေါင်းများစွာဖို့စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်4MQL4 အတွက်တီထွင်. မည်သို့ပင်စျေးကွက်၏ (Forex, အာမခံသို့မဟုတ်ကုန်စည်ဈေးကွက်), ညွှန်ကိန်းလွယ်ကူသောအမြင်တစ်ခုလက်လှမ်း form မှာကိုးကားကိုယ်စားပြုဖို့ကူညီ.
သြဂုတ် 16, 2019
သြဂုတ် 13, 2019
သြဂုတ် 9, 2019
© မူပိုင်ခွင့် 2015 - ForexIndicatorsDownload.com